२o७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार / Friday, November 22, 2019
वर्तमान सरकार असफल भयो : प्रवक्ता शर्मा
इनरुवा । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार असफल भएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन धरान सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिकामा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिलेको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले
काँग्रेसलाई सरकारको प्रश्न – अफताब बारे कहिले बोल्ने ?
काठमाडौँ । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले काँग्रेसले उपनिर्वाचनमा जालो हान्न २१ आरोप लगाएको बताएका छन् । सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले काँग्रेसले
पोखरा । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता यज्ञबहादुर थापाले आउँदो उपनिर्वाचनको परिणाम काँग्रेसका पक्षमा हुने बताएका छन्। कास्की क्षेत्र नं २ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रचारप्रसार अन्तर्गत आज पोखरा महानगरपालिका
नेपाली भूभाग कुनै पनि हालतमा छोडिदैन– महामन्त्री कोइराला
विराटनगर । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भएकोले कुनै हालतमा छाड्न नसकिने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री
तनहुँमा बाह्र करोडका ६० योजना छनोट
सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाइँदै
आन्तरिक पर्यटन मेला फागुन ९ देखि
मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न एक पक्राउ
औद्योगिक विकासका लागि योजनाबद्ध रुपमा लाग्छु : मन्त्री भट्ट
गढीमाई मेला विधिवतरूपमा शुरु
टी-१० लिगमा आज पारस र सन्दीप आमने सामने
आजपनि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
बागलुङमा भूपू सैनिकहरुको नवीकरण र रुजु कार्य शुरु